के तपाई मदिरा सेवन गर्नुहुन्छ ? यसले हानी गर्छ, फाइदा गर्दैन ! - नेपालबहस
के तपाई मदिरा सेवन गर्नुहुन्छ ? यसले हानी गर्छ, फाइदा गर्दैन !
| १८:३७:५० मा प्रकाशित
२३ बैशाख, काठमाडौं । मदिरा सेवनबाट मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुने भन्दै अहिलेको स्वास्थ्य सङ्कटका समयमा मदिरा सेवन नगर्न अपिल गरिएको छ । मदिरा सेवनबाट मुलुकका विभिन्न मागमा मानवीय क्षति भएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा मदिराको सेवन गरेर आफूलाई थप जोखिममा नपार्न पनि आग्रह गरिएको हो ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले मदिराको सेवनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा ह्रास गर्ने भन्दै यसले कोरोना सङ्क्रमणको थप जोखिम बढ्ने बताए । “मदिराले हानी गर्छ, फाइदा गर्दैन, कोरोना भाइरसलाई नष्ट गर्ने कुरै भएन, न मानिसमा छर्केर नै यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ न सेवनले नै रोक्न सकिन्छ । यो दुवै हिसाबले मदिराको प्रयोग हानीकारक छ”, उनले भने ।
प्रवक्ता देवकोटाले मुलुक लकडाउनको अवस्थामा मदिरा सेवन गर्नुको साटो शारीरिक तथा मानसिक हिसाबले सुदृढ हुने खालका क्रियाकलाप गर्न अनुरोध गरे। “मदिरा सेवनले कलेजोमा हानी गर्छ, त्यस्तै शरीरका अन्य अङ्गमा पनि असर गर्छ, जटिल रोगको अवस्था निम्तन सक्छ र मृत्यु पनि हुन सक्छ”, उनले भने । अधिक मदिरापानले मानसिक समस्या पनि निम्तन सक्नेतर्फ उनले सचेत गराए ।
ओलीलाई बामदेवको जवाफ,म तपाईंसँग आउन सक्दिन १६ घण्टा पहिले
नेपाल बैंकले बैशाख २२ गतेदेखि साढे ३ अर्बको ऋणपत्र बिक्री गर्ने १६ घण्टा पहिले
प्राइम कमर्सियल बैंकको ऋणपत्र रजिष्ट्रारमा आरविवि मर्चेन्ट बैकिङ्ग १३ घण्टा पहिले
चलचित्र क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने सरकारकाे आश्वासन ७ घण्टा पहिले
धनुषामा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १७ घाइते ६ दिन पहिले
लक्ष्मी बैंकको थप नयाँ शाखा सिन्धुलीको रामटारमा २ दिन पहिले
कोरोनाको दोस्रो डोज खोप वैशाख ७ देखि लगाइने ७ दिन पहिले
प्रहरीकै संलग्नतामा तारे होटलबाट अवैध अनलाईन गेम ४ हप्ता पहिले
ताइवान रेल दुर्घटना : ४८ जनाको मृत्यु, ६० काे उद्धार ३ हप्ता पहिले
धरानमा संक्रमणबाट ४५ वर्षीय पुरुषको मृत्यु १ दिन पहिले
कन्सुलर सेवा विभागमा लिखत प्रमाणीकरणको नयाँ व्यवस्था २ दिन पहिले
प्रतिगमनकारी षड्यन्त्रको अन्त्य भएको छैन: प्रचण्ड ३ हप्ता पहिले
कोरोनाको उपचारमा मलेरियाको औषधिको परीक्षण शुरु १२ महिना पहिले
अफगान सरकारव्दारा १५०० तालिबान लडाकू हिरासतमुक्त १ वर्ष पहिले
कामना सेवा विकास बैंकको लाभांश दर लगातार घट्दो क्रममा, आक्रामक व्यापार विस्तार गर्न नसक्दा प्रति शेयर आम्दानी लाजमर्दो १ वर्ष पहिले
ओली सरकार पत्रकारिता पेशालाई भजनमण्डलीमा रूपान्तरण गर्न उद्दत २ वर्ष पहिले